Intaka yeParadesi Bungalows
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguStephen
I-Bird of Paradise Bungalows yindawo encinci ye-boutique ye-bungalows ezi-8, i-5 yamaplanga e-Khmer epholileyo epholileyo, kunye ne-3 yezitena eziphezulu ezakhiweyo kunye ne-air-con, ebekwe kwigadi entle yaseTropiki. Zonke zinebalcony yabucala, iTV yentambo, igumbi lokuhlambela leen-suite elineshawa. I-wi-fi yasimahla kunye nokusetyenziswa kweebhayisekile. Ii-bungalows zisebenza yonke imihla.
Idesika yangaphambili ibonelela ngeendwendwe kwinkonzo yokuhlamba impahla, ukhenketho, amatikiti kunye neteksi yexabiso elimiselweyo.
Isidlo sakusasa sahanjiswa ukusukela ngentsimbi yesi-7 kusasa kunye neentlobo ngeentlobo zokutya okumnandi okufumanekayo imini yonke, kunye neziselo ezishushu nezibandayo ezonwabelayo kwiParadesi yeBar entsha.
I-Kep intle. Kulapho iinduli ezinamahlathi zidibana khona nolwandle. Iimbono ezimangalisayo zolwandle ngaphandle kweGulf of Thailand eneziqithi kunye nentaba ethe qelele ebheke emazantsi ukuya kwisiqithi saseVietnam sasePhu Quoc kwaye ubuyela emantla ukuya eKampot naseBoker National Park.
I-Central Kep inolwandle olucocekileyo lwesanti yegolide ngokuchasene nonxweme olunamatye ecaleni kwe-Crab Market stretch. Indawo ifikeleleka kakhulu ngebhayisekile, isithuthuthu okanye ituk tuk ukuze uyijonge.
I-Kep intle. Kulapho iinduli ezinamahlathi zidibana khona nolwandle. Iimbono ezimangalisayo zolwandle ngaphandle kweGulf of Thailand eneziqithi kunye nentaba ethe qelele ebheke ema…